Sheeko dheer: Marnaba umuu qalmeyn!!! Isbedelka Cusub Nolosha? • Oodweynenews.com Oodweyne News | Oodweynenews.com Oodweyne News
Sheeko dheer: Marnaba umuu qalmeyn!!! Isbedelka Cusub Nolosha?
Warar mudooyinkii udanbeyay lahadal hayay ayaa isbuucaan si sax ah uso shaacbaxay kadib markii Ilhaan Omer Iyo Ahmed Hirsi ayaa gabadha hada shaqada congerska heshay ee Ilham Omer maxkamad kutaal Minnesota ugudbisay Waraaqado codsi ah oo isaga fureyso ninkedii oo horay u kala Tageen sidaan oo kale sanadi 2002 Lakinse dib isugu laabteen 2018 ayaa hada dacwadooda furiin ka furmay gobolka ay matasho.
Ilhaan ayaa intii qilaafka jiray xariir layelatay nin maalqabeen udashay Dalka Mareynkanka kaasoo looga shakisanyahay inuu lacago badan banki qarsoon ugu diro ilhaan lacagaas oo ahaa kuwa hada kiiska dawcada furiinka lagu qarash gareeyay waxaane cadeeyn sababta uu utaagerayay Talaabada Ilhaan Omer ee gudbinta Dacwada Furiinka.
Tim Mynett’s ayaa warbaahinada Dalka Mareynkanka soo sawirayeen isaga iyo ilhaan oo tagaya goobo qarsoon oo lagu caweeyo Iyo goobo ganacsi si wada jir ah uga wada adeeganaya.
TIm Mynett’s wuxuu ahaa shaqsigii kamasuulka Udiyaartiii Ilhaan in ay hesho Jagadaan wuxuuna gudoomiye ka ahaa Nidaamkii Doorashada ee Ilhaan islamarkaana kamasuul ahaa in ay so gasho saaxada Siyaasada Dalka Mareynkanka.
Masuulkaan ayaa horay u kala tageen xaaskisa sanadkii 2017 xiligaa wixii kadanbeyay wuxuu ahaa Lataliye Iyo xildhibaan Xisbiga Democrat.